को बन्ला विश्वकप विजेता? - BBC News नेपाली
को बन्ला विश्वकप विजेता?
Image caption ब्राजीलको साओ पाउलोमा शुरु भएर रियो डे जेनेइरोमा विश्वकप फुटबलको समापन हुनेछ
यो पल्ट विश्वकपको विजेता को होला? बीबीसीका “फुटबल पण्डित” हरुको भविष्यवाणी
-क्रिश बेभन, बीबीसी स्पोर्ट
विश्वकप फुटबल प्रतियोगीता यहि १२ जुन विहीबार साओ पाउलोमा आरम्भ भएर १३ जुलाईमा रियो डे जेनेइरोमा सम्पन्न हुनेछ।
विभिन्न ३२ वटा टोलीले जितको लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। तर यो विश्वप्रसिद्ध ट्रफी कस्ले हात पार्ला? आगामी चार हप्तासम्म चल्ने विश्व फुटबलको रंगमञ्चमा हुनसक्ने रोमाञ्चक प्रस्तुतिका बारे बीबीसी स्पोर्टका टिभी तथा रेडियो प्रस्तोता तथा विज्ञहरुको अनुमानमाथि एक दृष्टि:
ग्यारी लिनेकर: मलाई यो पटक लियोनेल मेस्सीको समय आएको र अर्जेन्टीनाले विश्वकप जित्छ की जस्तो लागेको छ। तिनीहरु प्रतिरक्षाको दृष्टिले केहि कमजोर देखिन्छन्। तर तिनीहरुका कोच अलेहान्द्रो साबेय्या उत्तम छन् र तिनीहरुसंग प्रतिभाशाली फरवार्ड खेलाडीहरु छन्। मेरो विचारमा विगत केहि महिनादेखि नै मेस्सीले आफूलाई यो प्रतियोगीताको लागि तयार पार्दै आएका छन्। तिनीहरुको समूह पनि सजीलो खालको नै परेको छ, त्यसैले तिनीहरु धेरै शक्ति खर्च नगरीकनै नकआउट चरणहरुमा प्रवेश गर्नेछन्।
एलन शियरर: मेरो चयन ब्राजील हो। तिनीहरुले कन्फेडरेशन्स कपमा निकै राम्रो प्रदर्शन गरेका छन्। तिनीहरुका ब्यवस्थापक लुइज फेलिप स्कोलारी छन् जस्ले यो सबै पहिले पनि अनुभव गरिसकेका छन्। गत गृष्मयामको समयमा जस्तै यदि नेयमारले राम्रो प्रदर्शन गरे भने यो पटक तिनीहरुले जित्ने सम्भावना छ।
Image caption विश्वकप फुटबल प्रतियोगीताको विजयी को होला भन्ने बारे बीबीसीका विज्ञहरुले आफ्नो अनुमान दिएका छन्
क्रिश वाडल: स्पेन र अर्जेन्टीना अन्तिमसम्म पुग्नेछन् तर मेरो छनौट ब्राजील हो। तिनीहरु आयेजक राष्ट्र हुन् साथसाथै तिनीहरुको टोली पनि बलियो छ। त्यसमाथि यो विश्वकपको अयोजना गर्नु हुन्थ्यो की हुंदैन थियो, यो पैसाको बरबादी हो की होइन भन्ने जस्ता विषयलाई लिएर देश भित्र भैरहेको विरोध प्रदर्शन र अन्य समस्याहरुका कारण पनि यो टोली केहि गरेरै देखाउने अठोटमा देखिन्छ। मेरो विचारमा तिनीहरुले यो पटक जित्नै पर्छ नभए तिनीहरुल जवाफ दिनु पर्ने धेरै प्रश्नहरु खडा हुनेछन्।
फिल नेभील: विद्यमान अवस्थाहरुका कारण पनि म युरोपेली टोलीलाई भन्दा दक्षिण अमेरिकी टोलीलाई समर्थन गर्दैछु। र मेरो चयनमा अर्जेन्टीना रहेको छ। मेस्सीको रुपमा तिनीहरुसंग संसारकै सबैभन्दा उत्तम भन्न नसकिए पनि उत्तम मध्येका एक खेलाडी छन्। तिनीहरुको खेल प्रणाली पनि एकप्रकारले स्थायी प्रकारको बनीसकेको छ जुन उनलाई सुहाउंदो रहेको छ।
प्याट नेभिन:‌ ‌दक्षिण अमेरिकामा खेल्नुको अर्थ युरोपेली टोलीहरुले आफ्नो खेल शैलीमा परिवर्तन गर्नु पर्नेछ- स्पेनले कन्फेडरेशन्स कपमा आफ्नो साविकको गतिमा खेल्न खोजेको थियो तर त्यसले काम गरेन। अब तिनीहरुले ब्राजीलको मौसम सुहाउंदो खेल शैली अपनाउनु पर्छ। त्यसमाथि ब्राजीलको टोली एकदम राम्रो छंदैछ ‌अनि आफ्नै स्वदेशी मैदानमा खेल्दा केहि सहजता त निश्चय नै हुन्छ। त्यसैले म ब्राजीलको पक्षमा छु।
रबी स्याभेज: म मेस्सीको कारणले मात्र अर्जेन्टीनाको पक्षमा भएको होइन। तिनीहरुसंग सरजीओ आगुएरो पनि छन् आक्रामणका लागि। तिनीहरुको अग्रपंक्तीले अन्य टोलीहरुलाई उडाइदिन सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ।
पछाडी भागमा खेल्ने तिनीहरुका अरु खेलाडी पनि उत्कृष्ट छन् र तिनीहरु पनि आवश्यक परेको खण्डमा निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत हुनेछन्।
Image caption ब्राजीलमा विश्वकप आयोजनाको विषयलाई लिएर विवाद र विरोधहरु भैरहेका छन्
ब्र्याड फ्रीडेल: मलाई ब्राजील बाहेक अरुमा ध्यान दिन गाह्रो परिरहेको छ। मलाई थाहा छ ब्राजीललाई छान्न सजीलो छ तर तिनीहरुसंग केही बेजोडको प्रतिभा भएका खेलाडीहरु छन्। र तिनीहरुले फरक मौसम र देशका विभिन्न भागमा यात्रा गरेर प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने जस्ता आफ्ना सामु आइपर्ने सबैजसो विषमतालाई अरु टोलीको दांजोमा सजीलै पार गर्न सक्छन्।
मार्टीन किओन: गत ग्रीष्मयामको कन्फेडरेशन्स कपका बेला म ब्राजील क्याम्पमा थिएं। त्यसबेल तिनीहरुको खेलाडीहरुबीच र दर्शकहरुसंगको भावनात्मक सम्बन्ध देखेर म चकित परेको थिएं। त्यो एउटा वास्तविक शक्तिको रुपमा रहेको थियो। तिनीहरुको टोली पनि उच्चकोटीको छ- नेयमार यो समग्र प्रतियोगीतामा चम्कीलो खेलाडी भएर देखिनेछन्।
तिनीहरुमाथि निकै दबाब छ तर मेरो विचारमा तिनीहरु यो दबाबको सामना गर्न सक्ने अवस्थामा छन्।